Kpop မိန်းကလေးအဖွဲ့တွေထဲမှာ Blackpink , Twice နဲ့ (G)I-DLE တို့ က အရမ်းကို အောင်မြင်နေကြတဲ့အဖွဲ့ တွေဖြစ်ကြသလို အဖွဲ့ဝင်တွေ ကလည်း တကယ့်လက်တွေ့ဘဝမှာ တစ်ဉီးနဲ့တစ်ဉီးချစ်ခင်ကြတဲ့ သူတွေပါ ။ Blackpink Lisa, Twice’s Jihyo နဲ့ Mina , ...
tvN K-Drama မှာလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လကတည်းက ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ခြင်းကို ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ Twenty Five Twenty One ဇာတ်လမ်းတွဲဟာဆိုရင်တော့ပရိသတ်တွေအကြားအရမ်းကို ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုပါ၊ ဒီဇာတ်လမ်းထဲက အဓိကသရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဖြစ်တဲ့Kim Tae Ri ဟာဆိုရင်ဇာတ်လမ်းထဲက နာဟီးဒို ရဲ့ပုံစံကို ကိုးကားပြီး ဇာတ်ကောင်ရဲ့ Accessories တချို့နဲ့ VIP ...
မကြာသေးခင်က IU ဟာ နိုင်ငံရပ်ခြားတစ်နေရာဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် မှာရှိတဲ့ Cannes မှာသူမရဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ဉီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့Video အတိုလေးကို Twitter မှာတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူမရဲ့ Video ကို အာရုံစိုက်တဲ့သူတွေများပြာလာခဲ့ပါတယ် ၊ပရိတ်သတ် တစ်ဉီးက Cannes ရဲ့လမ်းတစ်လျောက်ကို ဖြတ်ကျော်လာစဉ် သူမကို လတ်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးတော့ မင်းဒီမှာပျော်နေတာလားလို့ မေးခဲ့ပါတယ် ...
ဇွန်လ 20 ရက်နေ့ထုတ် သီးသန့်မီဒီယာကတင်ထားတဲ့သတင်းအရ အမည်မဖော်လိုသူတစ်ဦးက Nam Joo Hyuk ကို အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းကျောင်းအထိ6နှစ်ကြာ ကျောင်းတွင်းအနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်။ သက်သေအဖြစ် နှစ်ချုပ်စာအုပ်တစ်ပုံကို ပြထားပြီး Nam Joo Hyuk က အခြားအတန်းဖော်များကို ရိုက်နှက်ခြင်း၊ အနိုင်ကျင့်ခြင်း၊ ...
အသံပါဝါအား‌ကောင်းကောင်း ကကွက်အလန်းစားတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အား‌ပေးမှုတွေကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Mamamoo အဖွဲ့ရဲ့ Agency ဖြစ်တဲ့ RBW က Mamamoo အဖွဲ့ဟာ Album အသစ်အတွက်ပြင်ဆင်နေပြီး ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်ပါ ပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့ June 20 ရက်နေ့မှာ တရားဝင်ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ Agency ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စာထဲမှာတော့ ‘Mamamoo အဖွဲ့ဟာ June 19 ...
Girl Generation ဟာဆိုရင် 5နှစ်မှာ တစ်ကြိမ် ပြုလုပ်လေ့ရှိတဲ့ သူတို့ရဲ့ ပထမဆုံး Full Group Comeback ကို ပြီးခဲ့တဲ့ 2017 August ကတည်းက ပြုလုပ်မယ်လို့ ကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်သိပ်တော့ အံ့ဩစရာမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့လည်း ပရိတ်သတ်တွေကတော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ စောင့်မျှော်ခဲ့ပါတယ် ,ပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်ရကျိုးနပ်အောင် လည်း Girl ...
Squid Game Season 1 ကတည်းက ကြည့်ရှူအားပေးခဲ့တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက် နောက်ထပ် လည်ပင်းရှည်စရာဖြစ်အောင် Season2ထွက်ရှိပြီဆိုတဲ့အကြောင်Netflix က June 12 Twitter post မှာ Season 1 က Animated Doll ရဲ့ မျက်လုံးမှာ2...
Hiatus လို့ ကြေငြာခဲ့တဲ့ BTS အဖွဲ့
ပျိုတိုင်းကြိုက်ဖြစ်တဲ့ BTS အဖွဲ့ကတော့ June 14 ရက်နေ့မှာ အဖွဲ့ရဲ့ Debut လုပ်ခဲ့တဲ့ရက်မှာ ကျင်းပမြဲဖြစ်တဲ့ 2022 BTS Festa မှာ ဒီသတင်းကို ပြောပြပေးသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိတ်သတ်တွေကတော့ ကြားကြားချင်းမှာ အံ့ဩခဲ့ကြပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင် activity တွေနဲ့မြင်တွေ့ရဦးမဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကိုမြင်ရဖို့ကိုလည်း စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါတယ်။ အရင်တစ်ပတ်က ...
Army တွေရဲ့ အချစ်တော် BTS Jungkook ဟာဆိုရင် Physical Workout လုပ်ဆောင်နည်းတွေကို မနေ့ကသူ့ရဲ့ Livesteam လွှင့်နေစဉ်အတွင်းပရိတ်သတ်တစ်ယောက်က မေးမြန်းတာကြောင့် ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ၊ သူဟာမနက်တိုင်း Workout Equipment တွေမလိုအပ်ဘဲဘယ်လိုမျိုး လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးဝိတ်ချခဲ့လဲ? အိမ်မှာ Workout လုပ်ချင်သူတွေအတွက် နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတဲ့နည်းလမ်း တွေ ပေမဲ့ Jungkook အတွက်တော့ လွယ်ကူနေတဲ့ပုံပါပဲနော် ။ ...
Kpop Idol တွေ ဂရုစိုက်ရမဲ့ စံနှုန်းတွေကို လစ်လျူရှုထားနိုင်တဲ့ Jessi
“လူတိုင်းက သူတို့ကြိုက်တဲ့သူနဲ့ ဒိတ်နိုင်တာပဲလေ အိုကေ။ မင်းက idol တစ်ယောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တောင် ကိစ္စမရှိဘူး” ဒါကတော့ Jessi က သူ့စိတ်ထဲမှာရှိတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောခဲ့တဲ့စကားတွေထဲက တစ်ခုပါ။ သူမစိတ်ထဲမှာရှိတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတတ်ပြီး စံနှုန်းတွေကို ဂရုမစိုက်ပဲ လုပ်ချင်တာတွေကို စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ‌ပြောတတ်တာကြောင့် စံနှုန်းတွေကို ဂရုစိုက်တတ်ကြတဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာတော့ ပွင့်လင်းလွန်းတယ်ဆိုပြီး အဝေဖန်ခံရတာတွေလည်း ...
ဒီ sign ပိုင်ရှင်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့သူတွေကတော့ လက်မလွှတ်သင့်တော့ဘူးနော်။ ဒီလိုပြောလို့ အခြား sign တွေက မရွေးချယ်သင့်ဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ချစ်တဲ့သူတိုင်း ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေလို့လည်း မင်မင်က ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ 1. Cancer ဒီ sign တွေကတော့ လူတစ်ယောက်ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွယ်ငြိမိသွားပြီဆိုရင်‌တော့ ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ကြား ဆက်ဆံရေးတွေ တိုးတက်လာမှာပါ။ သူတို့ဟာ ...
BTS’s RM ရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ကိုကြည့်ပြီး စိတ်နေစိတ်ထားကိုခန့်မှန်းခဲ့တဲ့ သြစတေးလျ လူမျိူး Alan Stevens
လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာသွင်ပြင်ဖွဲ့စည်းပုံ ကို ကြည့်ရင် စိတ်နေစိတ်ထားကို အလွယ်တကူ ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ လူတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာအများကြီးရှိကြပါတယ် အဲ့ဒီ့ထဲက မှ သြစတေးလျ လူမျိူး တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Alan Stevens ဟာ…….
Penthouse ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းကြောင့်ကြည့်ရှူသူတင်မကဘဲ ရိုက်ကူးသူကို ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေခဲ့ရကြောင်း ပြောလာတဲ့ Kim So Yeon
Penthouse Season3ရဲ့ အပိုင်း ၅ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်းကတော့ ကြည့်ရှူသူပရိသတ်တွေကို ရင်ထိတ်စေရုံမကဘဲ တကယ်တမ်း ပီပြင်အောင် စိတ်နှစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရတဲ့